I-Wuhu Huaji Filtration Technology Co, Ltd.
Wuhu Huaji product Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2012, i-R & D yobungcali kunye nokuveliswa ezahlukeneyo abavelisi kumatshini lokucoca ulwelo.
ingqibelelo igolide, qhubeka uphucula
ukuphuculwa okuqhubekayo, ukwaneliseka kwabathengi
Ukwaneliseka kwabathengi yimpumelelo yethu!
Okwangoku, iimveliso eziphambili ngamashishini abucala ezenzululwazi kunye netekhnoloji egxile kuphando, kuphuhliso nakwimveliso yokunyibilika okuphefumlelweyo kwezixhobo zokucoca ulwelo. Ezona nkampani ziphambili zezi: Izinto zokucoca ulwelo ezicocekileyo, njl.
Iimveliso zisetyenziselwa ukuhluza ulwelo, ukucoca umoya, i-elektroniki, ishishini lamachiza, amayeza, ukutya kunye namanye amashishini.
Ukusukela ukuba inkampani yasekwa, sihlala sihambelana nomba "wobunjani, ukuphuculwa kwetekhnoloji, inkonzo ekhawulezileyo", ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo zeefilitha zabavelisi bokucoca amanzi kunye nabasebenzisi. Sineenkqubo zemveliso egqibeleleyo kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo, ke iimveliso zeHuaji ziphumelele ukuqondwa ngokubanzi kwiimarike zasekhaya nezangaphandle, kubandakanya ukugubungela amazwekazi ama-6 kunye namazwe angama-90 kunye nemimandla emhlabeni.
Ukujonga kwikamva, siza kuqhubeka nokuphuhlisa iimveliso ezintsha, ukuphucula amandla emveliso kunye netekhnoloji, kwaye siphucule ngakumbi umgangatho wemveliso. Ngokusebenza kwexabiso eliphezulu, kudala eyona ndleko inkulu yemveliso kubathengi basekhaya nabangaphandle, kwaye kutofa amandla amatsha kwinkampani ukuqhubela phambili ukuphucula isiphumo sophawu.
I-Wuhu Huaji yamkela ngokufudumeleyo abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba batyelele kwaye bathethathethane ngamashishini.
Siliqabane lakho elithembekileyo, yonke indlela yokufezekisa ukuthembakala kwakho, sebenzani kunye ukwenza ikamva eliqaqambileyo.
Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, Kk Isihluzi seCartridge, iCartridge yokucoca amanzi, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Icebo lokucoca ulwelo emgceni,